Garandi / Service - Shenzhen Penyai Technology Co., Ltd.
Penyai kupa azere zvitsigiso vatengi vedu pre-sale uye pashure-okutengesa. Ine paIndaneti pfuma kutsigira kwedu siyana chigadzirwa mitsetse. Browse mashoko Support chikamu uye taura nesu uchifanira kuwana inodiwa.
Warranties, Service Plans uye Repair
Penyai anotitsigira zvikuru, vanoratidza uptime uye Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri unongotaura. Kugovera soro pamwero basa, Penyai anozviita pachedu.
Industry-kutungamirira warranties vane mwero pamwe Penyai akatungamirira zvigadzirwa.
Chigadzirwa Service Plans
Suite kuti kwenguva warranties kusangana zvaunoda. Mari iri Planar Service Plan kuti uzvidzivirire anodhura kugadziridza uye downtimes mirefu.
Access kuna Penyai Global richikurukura vakazvitsaurira wevanamakanika vakadzidziswa kuitira gadziriro yenyu yakaiswa, akaramba uye pakugadzira kusvikira Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri nemitemo.
Penyai Repair Services vari nezvechisarudzo kana chigadzirwa yako kunze garandi uye chakaremara.
Akatungamirira Products Standard Limited Warranty
Makorokoto kutengwa wako ane Penyai akatungamirira mavhidhiyo rusvingo! Zvakakodzera yokugadza, setup uye hanya, unofanira kunakidzwa nemakore akawanda risingaenzaniswi mufananidzo yepamusoro, akavimbika uye kuita.
Zvinotevera mashoko uye zvemupiro Standard Limited Warranty vanomiririra chibvumirano pakati pedu, akaigadzira ndiye akatungamirira mavhidhiyo rusvingo chigadzirwa (Shenzhen Penyai Technology Co., Ltd "Penyai") uye iwe, mutengi anenge wakawana Penyai akatungamirira mavhidhiyo rusvingo chigadzirwa zvakananga kubva Penyai kana kubva Penyai mvumo Distributor kana munyengeri. This Standard Limited Warranty anopiwa pachena pamwe kutengwa berere chigadzirwa kubva anotevera mhuri: Penyai akatungamirira Vhidhiyo rusvingo anoratidza.
This Standard Limited Warranty zvinoshanda akafukidzwa Penyai zvigadzirwa yakatengwa pamusoro kana pashure chinobudirira musi yakati pazasi. Penyai kwakachengetwa kodzero kushandura mashoko garandi ichi. Kuchinja kwakadaro achashanda akafukidzwa Penyai zvigadzirwa yakatengwa pamusoro kana pashure chinobudirira musi yakadzokororwa garandi.
•-gore 2 kudzivirirwa urema mune zvokunyama uye hunoshamisa
• Advanced ainge atumirwa pamusoro yokutsiva zvikamu kana zvigadzirwa (dzakakudzingai akatungamirira usina kukonekita)
• Kuwana 24x7 nechimbichimbi foni rutsigiro
Penyai kunogarirwa zvigadzirwa zvayo kusununguka kubva urema mune zvokunyama uye magadzirirwo panguva garandi nguva yakapiwa pazasi. Kana, pakutsunga kwedu, yemudzimu kunoratidza kuva chakaremara mune zvokunyama kana basa panguva garandi nguva, ticharamba vagadzirise kana kutsiva chakaremara chikamu mutsva kana vagadzirise chikamu zvakafanana. Kana nyaya iri vakafunga munhu mukugadzira kuremara pamwe akatungamirira chigadzirwa, ticharamba vagadzirise kana kutsiva chakaremara chikamu panguva kungwara kwedu. Kana kugadzira kana yaitsiva chikamu kana chigadzirwa akatsunga nesu kuti kwete kuva kutengeswa noitika, tichaita dzosera munhu prorated mugove nomutengo (dzaona inobva Zvakasara garandi nguva uye ipapo-kuitika MSRP1 chete kana munhu zvakafanana chigadzirwa).
Muna garandi Period, ticharamba tiine uye kutsiva kuremara zvinoumba for free, kana dambudziko ndeyedu. Asi iwe unofanira kubhadhara zvose zvacho zvakasvika mari.
Pashure 2 years, chete isu undoraira zvinhu cost, unofanira kuva nebasa zvacho.
All zvakatungamirira Video rusvingo zvigadzirwa vari kuumbwa kwemakore maviri kubva musi zvinenge zvabva Penyai. Accessories All uye Field Replaceable dzakabatana (FRUs), kusanganisira asi kwete kungoitirwa netambo, remotes, magetsi uye controller mapuranga, akatungamirira usina kukonekita, akatenga panguva kwokutanga chigadzirwa kutenga vari kuumbwa kwemakore matatu kubva musi zvinenge zvabva Penyai. zvishongedzo All uye FRUs akatenga pachapera chigadzirwa kutenga vari kuumbwa kwemazuva 90 kubva musi zvinenge zvabva Penyai.
This Standard Limited Warranty rinotaura chigadzirwa akatengwa kubva Penyai kana Penyai munyengeri mvumo kana Distributor uye chinoshanda chete nokuda yepakutanga mutengi uyo akatengwa berere chigadzirwa. The munyengeri kana Distributor pakero Technical Support pamusoro penyu muna chiitiko ane chigadzirwa urema. garandi ichi hachisi transferable. Ungafanira kupa uchapupu hwokuti kutengwa.
This Standard Limited Warranty haibatanidzi kana rine parinoperera zvinotevera:
1. Products asina akatengwa kubva Penyai kana ane mvumo Penyai Distributor kana munyengeri.
2. Labor kana mari yebhazi kuti kugadzwa, akaisa-kumusoro, kugadziriswa, kugadziridzwa kuratidza pazviruva, kubviswa, kuzodzosera kugadzwa kana mamwe basa mari chakakonzerwa namaneja mutengi.
3. ainge atumirwa Delivery nguva uye Kuwanikwa dzingasiyana kwakavakirwa mavambo uye rwendo. Dzatisingazokwanisi anunure kuna PO Box uye Apo / FPO Box kero.
4. Rental mari chakakonzerwa namaneja mutengi.
5. Chero chigadzirwa hwaakange Serial nhamba yave defaced, dzakachinjwa kana kubviswa.
6. Product kuti yave resold, akatamisira, dzokurenda, was, vakarasika, zvakabiwa kana kuraswa.
7. Chero software, kusanganisira asi haana kungogumira uchishandisa hurongwa.
8. Damage, kudzikira kana atadze kushanda zvakanaka kunokonzerwa:
A. Accident, kushungurudzwa, zvisina kukodzera, kuregeredza, kufefetedza kukodzera & kutonhora, moto, mvura, njodzi, mheni kana nemamwe mabasa zvakasikwa, utsi dzokupisa (mudzanga kana zvimwewo), kunze komutemo chigadzirwa nadzurudzo (kusanganisira kushandisa imwe kunze komutemo pagomo), kana kutadza kutevera mirayiridzo yaipiwa pamwe chigadzirwa.
B. Repair, kana vakaedza kugadzirisa, mumwe munhu pane Penyai.
C. Chero kuvadza chigadzirwa panguva kana nokuda zvacho.
D. Chero kukuvara munguva chokugadza, kubviswa, disassembly uye pakuzosunganidza zvibereko nokuda mutengi.
E. Inokonzera kwokunze kuti chigadzirwa, akadai Magetsi nokufamba kana kukundikana.
F. Kushandisa zvokuyamura kana zvikamu kwete misangano nokurondedzerwa 's Penyai.
G. Normal yabvaruka uye zvakajairika Pixel pamwero kuwa-panze chokuita yakanaka nenamo akatungamirira rwokugadzira.
H. Customer akaita kuremara, kusanganisira asi hakungoitwi tagovera LEDs zvinobva kurova mupendero kana scratching achitevedza mberi.
I. Chero asiri kufanana kunokonzerwa-refu 24/7 mudzimu vhidhiyo wall doro achisiyanisa kunofambira mberi kugutsikana.
J. Kutadza kutevera Nokuraramisa nzira sezvaiva mubumbiro chigadzirwa wacho User Guide apo purogiramu raanotaura nguva dzose kwerunyararo chigadzirwa.
K. Chero mumwe chikonzero haana ukama akaremara zvokunyama kana hunoshamisa.
L. kunoshandisa kuratidza kunze pfungwa chakaipa mashandisirwo mamiriro yakanyorwa User Guide.
M. Software kana chishongedzo atadze kushanda zvakanaka.
Miscellaneous Kudzoka Nyaya
1. Hatidi kubvuma kudzokera chigadzirwa.
2. Kana chakaremara chigadzirwa adzorerwa uye vakatsunga kunze garandi pasi chero dzokubudiswa pamusoro apa, isu kuchengetera kodzero kubhadharisa mutengi mari kusapfuudza MSRP.
3. Kana chigadzirwa akadzokera uye akatsunga kuva No mhosva (NFF) Unit, isu kuchengetera kodzero inivhoyisi mutengi chero mari chakakonzerwa namaneja Penyai.
4. Ibasa pakati mutengi kuti zvakanaka that package chakaremara chigadzirwa uye anotakura kuti kero yakagoverwa pachishandiswa Customer Service mumiriri pamwe RMA nhamba vakatangazve kuratidzwa. Kana chakaremara Product haasi zvakanaka mumapepa uye wakaremara mu dzaifanoiswa panguva yayo paakadzokera Penyai, mutengi angachajwa kana rokugadziridza mari, kana repairable, kana MSRP ane yokutsiva chigadzirwa.
5. Replacement zvikamu kana chigadzirwa vachafunga vasara yepakutanga chigadzirwa wacho garandi kana mazuva 90 kubva musi zvacho, yaanopinda Hwakareba.
6. Customer anobvumirana tiine yokutsiva chikamu kana chigadzirwa yakapiwa Penyai uye kuti vakadzoka chakaremara chikamu kana chigadzirwa anova ndera Penyai.
Zvazvakaita Mutemo Local
This Standard Limited Warranty achikutsiura chaiwo kodzero, uye unogona kuva umwe kodzero kuti dzinosiyana nzvimbo nenzvimbo kusvikira munharaunda. Vamwe nzvimbo hatibvumiri yemararamiro zvakaburitswa warranties kana usarega achisiya kwemasanga kana dzinokosha kukuvadza, saka pamusoro zvausingakwanisi uye dzokubudiswa varege kushanda kwamuri.